गैँडाकोटमा महादेव विवादमा
By vijayafm on	 August 9, 2017 धर्मसंस्कृति, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
हरिकृष्ण रिमाल अध्यक्ष कोटेश्वर मन्दिर गैँडाकोट ४
“यस्तो इतिहास बरु कोटेश्वर मन्दिरको छ, विं.सं. २०३१ सालमा गैँडाकोटको खयरटाँडीमा महादेवको शिवलिङ्ग भेट्टायौँ, मूर्तिलाई २०३१ साल फागुन २७ गते मंगलबार शिवरात्रीको दिनबाट कोटेश्वर शिवालय मन्दिरमा राखि पूजा अर्चना गर्दै आएका छाँै । अहिले गोपेश्वरको खबरले हाम्रो पुरानो इतिहासलाई धमिल्याउने प्रयास गरेको अनूभूत भएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको हो ।”
सीता न्यौपाने अध्यक्ष गोपेश्वर महादेव मन्दिर गैँडाकोट २
विजय खबरमा प्रकाशित मन्दिरको परिचयमा मन्दिरका विषयमा आएका कुराले कुनै क्षेत्र, कुनै मन्दिरको आस्था र इतिहास मेटाउने प्रयास गरिएको होइन । कोटेश्वर मन्दिरकै कुरा गर्नु पर्दा, हाम्रो मन्दिरप्रति उच्च सम्मान छ । हामीले कोटेश्वरको मूर्ति ल्याएको भन्ने कुरा गरेका छैँनौँ, यस्तो कुरा भन्न त के सोच्न पनि सक्दैनौँ । हामी सबै महादेवका भक्त हाँै । झुट हामी बोल्दैनौ । गोपेश्वरका इतिहासका सन्दर्भमा हामीले भनेका कुरा हाम्रा अग्रजहरुले भन्दै आउनुभएको कुरा हो, हामीले सुन्दै आएको कुरा हो ।
गैँडाकोट । गोपेश्वरका महादेवका विषयमा अहिले फरक मत सार्वजनिक भइरहेका छन् । विजय खबरको अघिल्लो अंकमा “झपर्दीका शिवजी गोपेश्वरमा” शीर्षकको मन्दिरको आलेख सार्वजनिक भएपछि फरक मत सार्वजनिक भएका छन् । झपर्दीमा शिवजी भेटिएको भन्ने खबर नै सत्य नभएको शिवालय सेवा समिति गैँडाकोट ४ ले विज्ञप्तीनै जारी गर्दै खण्डन गरेको छ । शिवालय सेवा समिति गैँडाकोट ४ का अध्यक्ष हरिकृष्ण रिमालले गोपेश्वरमा राखिएको मूर्ति गैँडाकोट ४ बाट भेट्टाएर कुनै पनि समयमा नलगिएको दाबी गर्नुभयो । गैँडाकोट २ मा रहेको गोपेश्वर मन्दिरमा राखिएको मूर्ति कहाँबाट आयो आफूलाई थाहा नभएको तर गैँडाकोट ४ को कुनै पनि क्षेत्रबाट भेटाएको भन्ने कुरा सत्य नभएको रिमालको भनाई छ । यस खबरले गैँडाकोट ४ मा रहेको कोटेश्वर शिवालयको इतिहास ओझेलमा पर्न सक्ने सन्देश गएको भन्दै रिमालले भन्नुभयो “यस्तो इतिहास बरु कोटेश्वर मन्दिरको छ, विं.सं. २०३१ सालमा गैँडाकोटको खयरटाँडीमा महादेवको मूर्ति भट्टायौँ, मूर्तिलाई २०३१ साल फागुन २७ गते मंगलबार शिवरात्रीको दिनबाट कोटेश्वर शिवालय मन्दिरमा राखि पूजा अर्चना गर्दै आएका छाँै । अहिले गोपेश्वरको खबरले हाम्रो पुरानो इतिहासलाई धमिल्याउने प्रयास गरेको अनूभूत भएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको हो ।” कोटेश्वर मन्दिरका अध्यक्ष रिमाल संस्थापक समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो ।
कोटेश्वर मन्दिर गैँडाकोट ४ को शिवलिङ्ग
यता गोपेश्वर महादेवको मन्दिर गैँडाकोट २ की अध्यक्ष सीता न्यौपानेले कसैको आस्था र विश्वास माथि चोट पु¥याउने काम नगरेको बताउनुभयो । न्यौपानेले भन्नुभयो “ विजय खबरमा प्रकाशित मन्दिरको परिचयमा मन्दिरका विषयमा आएका कुराले कुनै क्षेत्र, कुनै मन्दिरको आस्था र इतिहास मेटाउने प्रयास गरिएको होइन । कोटेश्वर मन्दिरकै कुरा गर्नु पर्दा, हाम्रो मन्दिरप्रति उच्च सम्मान छ । हामीले कोटेश्वरको मूर्ति ल्याएको भन्ने कुरा गरेका छैँनौँ, यस्तो कुरा भन्न त के सोच्न पनि सक्दैनौँ । हामी सबै महादेवका भक्त हाँै । झुट हामी बोल्दैनौ । गोपेश्वरका इतिहासका सन्दर्भमा हामीले भनेका कुरा हाम्रा अग्रजहरुले भन्दै आउनुभएको कुरा हो, हामीले सुन्दै आएको कुरा हो । हाम्रो इतिहास अझै खोज्नुपर्ने देखिएको छ यो साँचो हो । यस घटनाले हामीलाई हाम्रो इतिहास खोज्न प्रेरित समेत गरेको छ । विजय खबरले हामीलाई हाम्रो परिचय खोज्न थप प्रोत्साहन दिएको छ ।” आफ्ना मन्दिरका सन्दर्भमा सुनेका कुरा नै भनेका हौँ, इतिहास खोज्ने क्रममा छाँै न्यौपानेले बताउनुभयो ।
गोपेश्वर महादेव गैँडाकोट २ को महादेवको मूर्ति
गोपेश्वर मन्दिरकी सचिव राधिका पाठकले छिट्टै मन्दिरको पुरानो इतिहासका विषयमा अध्यययन र खोज गरि लिपिबद्ध गर्ने बताउनुभयो ।